Tsipy kanetibe vehivavy – «Mondial 2017» : hiatrika ny ampahefa-dalana ny Malagasy, anio | NewsMada
Tsipy kanetibe vehivavy – «Mondial 2017» : hiatrika ny ampahefa-dalana ny Malagasy, anio
Par Taratra sur 11/11/2017
Mbola manohy ny lalany ny tovovavy malagasy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja tsipy kanetibe. Hatreto, tafita hiatrika ny lalao ampahefa-dalana i Madagasikara.
Na ratsy fanombohana aza ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja tsipy kanetibe, tanterahina any Kaihua, Sina, mitohy hatrany ny dian’izy ireo. Tafakatra ary hiatrika ny dingan’ny ampahefa-dalana, mantsy ry Cicine sy Mirana ary Hasina sy Tita Kely.
Hifandona amin’i Thaillande ny Malagasy, anio, eo amin’izany dingana izany. Azo lazaina fa hiendrika famaranana kely ity lalao ity, satria anisan’ireo firenena sangany ry zareo Thaillandaise. Raha tsiahivina kosa ny vokatra vitan’i Madagasikara, mandra-pahatongany amin’izao dingana izao, nandresy intelo ary resy indroa teo amin’ny lalaom-bondrona. Vokatra izay ampy niakaran’i Madagasikara amin’ny dingana manaraka : ny lalao ampaha-16-n-dalana. Nanomboka teo, nisesy ny fandresena azon’ny Malagasy. Nandavo an’i Kanadà, tamin’ny isa 13 no ho 6, ary nanilika ny ekipan’i Sina 1, tamin’ny isa 13 no ho 7, teo amin’ny ampahavalon-dalana.
Lavon’i Thaillande, tamin’ny isa mavesatra, 13 no ho 1, kosa i Tonizia. Sahirana kosa i Frantsa vao tafavoaka nanoloana an’i Estonie. Tamin’ny isa tery, 13 no ho 11, ny nahazoan’ny Frantsay, ny tapakilany. Mbola manohy ny lalany ihany koa i Cambodge, izay nandresy an’i Madagasikara, teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Anisan’ny ekipa afrikanina, faharoa, tafita hiatrika ny ampahefa-dalana koa ny Alzerianina, rehefa nanilika ny Aostralianina, tamin’ny isa 13 no ho 3.
Ankoatra izay, tafita hiatrika ny lalao ampahefa-dalana, amin’ny “tirs de precision”, ihany koa i Cicine, rehefa avy nandalo lalao sakana.